OGOW SABABTA RASMIGA AH EE SOOMAALIYA UGU QAYB GALEYN TARTANKA CECAFA 2017 KENYA | Ciyaarside.com
OGOW SABABTA RASMIGA AH EE SOOMAALIYA UGU QAYB GALEYN TARTANKA CECAFA 2017 KENYA
Waxaa usbuucan soo baxay jadwalka tartan goboleedka CECAFA 2017kaasi ay ka qayb galaan wadamada bariga iyo bartamaha afrika kaasi oo dhici doona sanadkan dhamaadkiisa waxaana lagu qaban doono Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa sanadkan tartankaasn ka baaqsaday dhowr wadan oo u arkay in aysan xulalkooda diyaar u ahayn in ay ka qayb galaan waxaana kamid ah Soomaaliya,Sudaan,Tanzania iyo Jabuuti waxaana ay ugu baaqdeen sababo iyaga u gaara ah waayo wadan walba waxaa uu sharci u leeyahay in uu ka baaqsan karo tartan ka qayb galkiisq ugu yaraan laba sanadood.
Hadaba maalmahan baraha bulshada ayaa waxaa la isla dhex marayay eedeen loo jeedinayo xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta oo lahaa go,aanka ka haritaanka tartankaasi inkasta ay saxaafada kenya kaga been abuurteen sababaha ay ugu baaqsadeen oo ay ku sheegeen dagaalo dalkeena ka socda taasi oo ah mid aan xaqiiq ahayn waayo soomaaliya waligeed kama baaqsan tartamada CECAFA heer naadi iyo xulkaba dalka xaalad kasta haku jiree waayo xilligan xilliyo ka amaan xun ayaa soo marnay waana ka qayb gali jirnay laakiin wararka la faafiyay ee sababta looga dhigay ayaa ah dagaal hoose oo lagu hayo kubadda cagta Soomaaliya waana ay soo bixi doonaan jawaabta oo cad oo xaqiiqda ku saleesan.
Aniga ma ihi afhayeen xirirka u hadlaya iyaga waa ay ka hadli doonaan dhawaan sababta ay ugu baaqsadeen laakiin waxaan rabaa in aan wax badan oo ogohay bulshada usoo bandhigo intii warar mala awaal ah la faafin lahaa taasi oo ah waajib dhamaanteen nagawada saaran.
Baaritaan aan muddo sameeyay si aan xog ogaal ugu helo arrintan ayaa waxaa ii soo baxay arrimo la rabo in la ogaado oo la is waydiiyo:
*Waxaa laga baaqan jiray tartamo is reeb reeb mid adduun iyo mid qaaradaba waana xaq uu leeyahay xiriirka maxaa hada tartan goboleed aan nacfi lahayn loogu qaylinayaa.
*Soomaaliya iyagaa ka baaqsaday tartanka ee lagama saarin mana jirto cid awood u leh in ay tartan ka saaraan waayo soomaaliya waa wadan madax banaan dhan kasta.
*Xulkeena waxaa uu ku jiraa diyaar garow xoogan waayo isaga oo aan diyaarsaneen ma aadi karo Kenya anaga oo og in guul darooyinkeena ay badanyihiin, guusheenana ay yareed waxaana loo diyaar garoobayaa tartamo kale oo adag.
*Soomaaliya waxaa ay xilal badan oo muhiim ah ka hayaan CECAFA waliba xilal sare iyaga la,aantoodna go,aamo lama qaadan karo waxaana ugu wayn guddoomiye ku xigeenka CECAFA ahna madaxwaynaha Xiriirka Soomaaliya Abdi Qani Said Arab.
*Ka qayb galka Soomaaliya waa u sharaf Kenya waayo taageereyaasha ugu badan iyagaa garoomada ku leh in ay ka qayb gali waayaana waa u sharaf xumo CECAFA iyo marti galiyaha.
*Bisha soo socota waxaa kismaayo ka bilaaban doona tartanka maamul goboleedyada kaasi oo aad loogu mashquuli doono waxaana fudud in laga baaqsado tartanka Cecafa.
*Jabuuti oo ah wadan wayn waxaa ay kala direen xulkoodii waawaynaa in muddo ah waayo guul darooyinkoodii ayaa batay guulahoodiina waa yaraadeen marka inta ay dib u habayn lagu sameenaayo xulkooda kama qayb qaadan doonaan wax tartan ah mid guud iyo mid qaaradeed wax qaylinaya ma aragteen.
*Wadamada sanadkan aan imaanin waxaa ay intooda badan ogyihiin qaabka ay Kenya u qoondeeso wadamada iyo wafdigooda taasi oo aad u hooseesa hab maamuuska iyo soo dbaweenta oo liidata.
*Kenya waxaa ay diiday 2016 in ay marti galiyaan wadamada dhan oo diyaar ah hadana waqti dhow ayay dheheen waa narti galineenaa taasi oo ah isku dhex yaac iyo nidaam la,aan.
*14 Octoober qarixii Muqdisho ka dhacay oo dad badani ku dhinteen 3 kamid ah ciyaartoy soomaali ah ayay ahaayeen xulkana garoonka uu ku tababarto waa Jaamacadaha bishaasi wax tababar ah ma sameen hal bil xul malagu diyaarin karaa jawaabta waa maya.
Sikastaba Waxaa idiin cadeenayaa in aysan jirin in wadankeena soomaaliya uusan sanadkan sababo diyaar garow xoogan iyo waqtiga oo aad u yar owgiis uusan ugu qayb galeen tartanka Cecafa waayo isla bisha soo socota waxaa Kismaayo ka bilaaban doona Tartanka maamul goboleedyada taasi oo xiriirka qaybihiisa kale duwan ku mashquuli doonaan mana aadi karaan tartan goboleed aan faa,iido badan lahayn.
Gabagabdii sanad kasta waxaa ka baaqsada wadamo dhowr ah oo cilado jira owgeed aan aadin tartankaasi kuwaasi oo Soomaaliya dhan kasta kaga roon sida dhaqaalaha iyo amaanka maxaa hada qaylada keenay hadii uusan Xulkeena isaga oo diyaar fiican ahayn aadin mise waa la qaylinayaa hadii goolal badan naga dhashaan waxaa imaan doona xul si adag loo diyaariyay oo ugu yaraan kaalintii hore badali doona si ay guul u keenaan markaasi ayaa la dareemi doonaa.